Waxaa ka mid ah Bidcada Jimcada: - SomaliNet Forums
Waxaa ka mid ah Bidcada Jimcada:
Postby ina Warfaa » Sun Jun 24, 2012 12:40 pm
Bidcada salaadda Sunnada hore ee Jimcada
Al-Callaama Sheekh Maxamed Naasirud-Diin al-Albaani -Eebbe ha u naxariistee- wuxuu ku yiri ”Silsila al-Hudaa wa Nuur (003/03) markii la weyddiiyey salaadda Jimcada ma leedahay Sunno horteed la tukado?
Sheekh Albaani wuxuu ku jawaabay ma jirto salaadda Jimcada Sunno ay leedahay oo horteed la tukado. Sunnadan Jimcada ee ay yaqaanaan maanta dadka badankiisa asal kuma laha Sunnada. Maxaa yeelay Xaddiiska ku soo arooray Saxiixul Bukhaariga oo ah Kitaabka ugu saxsan marka laga yimaado Kitaabka Eebbe ee tebintiisu ay ka sugan tahay as-Saa’ib Ibnu Yaziid wuxuu yiri:
Wuxuu ahaa Aadaanku waqtigii Nebiga amaanta Eebbe iyo nabadgelyadiisa korkiisa ha ahaatee ”Aadaanka koowaad oo keliya” markuu koro Rasuulku a.n.k. Minbarka waxaa addimi jirey Mu’addinka, markuu dhammeeyo Mu’addinka aadaanka, wuu istaagi jirey Rasuulka a.n.k. si uu u khudbeeyo. Mana jirto goor la tukado Sunno Jimce oo horteed la tukado.
Sunnada maalinta Jimce waxay tahay inuu qofka Muslimka ahi markuu yimaado Masjidka hadday ahaato waqti hore iyo waqti dambeba inuu tukado wixii uu jeclaysto oo uu ka gaaro hadday ahaan lahayd laba rakcadood, afar rakcadood, lix rakcadood, siddeed rakcadood iyo wixii ka badanba. Maxaa yeelay salaadahani waa Sunno, ma aha Sunno uu xaddiday Rasuulka amaanta Eebbe iyo nabadgelyadiisa korkiisa ha ahaatee. Hase ahaatee Sunnadan ay tukanayaan dadka ”labada Aadaan dhexdooda” ee salaadda Jimcada iyagoo u haystaan inay tahay salaad Sunno oo la tukado Salaadda Jimcada horteed ma aha wax uu yaqaanay Nebiga amaanta Eebbe iyo nabadgelyadiisa korkiisa ha ahaatee.
Re: Waxaa ka mid ah Bidcada Jimcada:
Postby Maandhow » Sun Jun 24, 2012 6:16 pm
jizaakaLaahu khairan akhuuna Ina warfaa
Postby Somaliman50 » Sun Jun 24, 2012 6:52 pm
waxaan isku khaldayay salaadi labada aadaan dhexdeeda iyo midaan la tukado kolkii masjidka lasoo galo, oo nebiga calayhi salatu wasalam siduu yiri 'ithaa dakhala minkum fil masjid fasalee rakcateen'. ow kamaa qaal.
Ogaysiis Waxaa laga guuray Isbadaldoon Waxaa looguuray Washamsi halaguqaado
by sahal80 » Sun May 08, 2022 4:00 am » in Politics - General Discussions
Sun May 08, 2022 12:21 pm
Bidcada ama caksiga Sunnada
by ina Warfaa » Sat Dec 25, 2010 2:30 am » in Islam - Islamic Way of Life
Waxaa la yaabi
by SummerRain » Mon Oct 01, 2007 10:29 pm » in General - General Discussions
by fatimazahra » Fri Jan 06, 2012 2:48 am » in General - General Discussions
Gobolkaan waxaa leh....
by Addoow » Tue Aug 26, 2008 7:58 am » in Provinces - Banaadir
Waxaa Layaab leh
by caburiye1 » Tue Aug 02, 2011 12:00 am » in General - General Discussions
Puntlanders waxaa ii sheegtaan
by hargaysaay » Mon Sep 05, 2011 8:57 am » in Politics - Puntland